Panzvimbo pekuronga izvi zvakagadziriswa sezvandafunga, kune akati wandei plugins anogona kukuitira basa racho.
With the Yoast SEO plugin iwe yaunogona kudzora kuti ndeapi mapeji anoratidzwa neGoogle mune ayo ekutsvaga mitsva uye ndeapi mapeji ayo yaisingaratidze Yoast haingokubatsire iwe kugadzirisa iyo meta tsananguro, zvakare inokupa iwe mhinduro pane yako kiyi yekushandisa mashandisirwo uye yakanaka preview yekuti peji rako raizotarisa sei mune Yekutsvaga Injini peji peji.
Izvo zvakati, iyo Yese mune Imwe SEO Pack inoita basa rakakura neiyo Dudziro Meta Tag, asi ini handitendi inoita basa rakanaka neiyo Keyword Meta Tag. Izvo zvinongopa ako akasarudzwa Makamu semazwi akakosha epositi yako, kwete anoda kutsanangudza zvakakwana. Iwe unogona kuseta mamwe mazwi akakosha epositi, asi haashandiswe chero kumwe kunhu.
Ndipo panouya zano rangu rinotevera replagin, Yekupedzisira Tag Warrior. Heano maitiro ekuona kuti iwe usanyora kiyi kiyi meta tag uchishandisa iyo All mune Imwe SEO Pack, dzima sarudzo Sarudza Zvikamu zveMETA Mazwi Akakosha:
Bvumirana newe nezve kusanganisa iwo maviri plugins, Douglas. Ini nguva pfupi yadarika ndakaisa All In One pane imwe yemasaiti angu uye iri hombe plugin asi, sezvaunotaura, keyword element haisi iyo yakakura. Izvo zvave zvataurwa zvinofarirwa neGoogle hazviise huremu hwakawandisa pamashoko makuru uye tarisa pane zita uye tsananguro panzvimbo.
Jul 12, 2007 na3:19 PM
Ndatenda neizvi. Zvidimbu zvesarudzo chimwe chinhu chandakashandisa kare asi kwete zvinobudirira sezvandaigona. Mazhinji ezvinyorwa zvangu zvinonyanya kufarirwa haasisina chidimbu zvachose.
Ndichadzokera ndova nechokwadi chekuti zvinyorwa zvangu makumi maviri zvinonyanya kufarirwa zvine chinyorwa chakanaka, pamwe nechero zvinyorwa zvitsva zvandinonyora mune ramangwana. Ini zvakare ndichatarisa mune iyo SEO plugin futi.
Aug 21, 2007 na1:52 PM
> Zvingave zvinoshamisa kana vanyori vaviri ava vaigona kuisa misoro yavo pamwe chete uye nekusanganisa maplugins maviri kuita rimwe.
Iyo SEO pack inogona kushandisa ma tag kubva kuUTW semazwi akakosha kana iwe ukaisa iyi sarudzo, asi sezvaunokurudzira iwe unogona zvakare kurega UTW ibate meta keywords. Sezvaunoziva UTW yekupedzisira vhezheni yaive yekupedzisira, nekuti WordPress 2.3 ichave yakavakirwa-mukati tag rutsigiro. SEO pack inogona kutsigira tag mazita munguva pfupi iri kutevera, zvese neUTW uye WordPress 2.3. Kana uine zvimwe zvikumbiro zvekubatanidza ndizivise.
Sep 14, 2007 na7:40 PM
Sevamwe vese ndine maplugins aya pablog rangu. Asi vanoita sevanodzima mumwe nemumwe neimwe nzira. Kutenda nenzira inoshanda yekuita kuti vashande pamwechete.
Pfungwa dzakanaka pane izvi. Meta tags chikamu chakakosha chekumisikidza yakabudirira, uye yekutsvaga injini ine hushamwari, kuvepo kwewebhu.
Zvinonakidza kufunga kutaura nezve meta keywords tag. Isu tose tinoita setiri kuishandisa. Ndanga ndichinatsiridza mawebhusaiti kweanopfuura makore gumi, kubva kumashure tisati tamboona kuti isu taigadzirisa! Nhasi tinoziva kuti mainjini makuru haatombotarise iwo keyword tag ... kana saka isu tinofunga zvakadaro.
Kana zviri izvo, nei tichishandisa meta keyword tag? Kune iwo mashoma einjini kunze uko vachiri kutarisa iwo keyword tag? Kupokana kunowana traffic yakawanda (kana iripo zvachose). Nokuda kwetsika? Pamwe. Zvinoshamisa kuti ndichiri kuzvishandisa.
Meta keywords angangove asina kukosha kumainjini makuru, asi anogona kugadzirwa otomatiki kubva kuma tag ako (ayo akakosha kune traffic). Uye tsananguro yemeta inogona kuwedzera yako CTR hombe nguva.